Ch 11 John – 2azụ
Home / Bible / Oziọma Jọn / Ch 11 John
11:1 Ugbu a, e nwere otu ọrịa ahụ, Lazarus nke Bethania, si n'obodo Mary na nwanne ya nwaanyị Martha.
11:2 Na Meri bụ onye tere Onyenwe anyị mmanụ otite na kpochapụrụ ụkwụ ya na ntutu isi ya; nwanne ya nwoke Lazarọs na-arịa ọrịa.
11:3 Ya mere, ụmụnne ya ndị nwanyị zigara ya, si: "Onyenwe anyị, le, onye ị hụrụ n'anya na-arịa ọrịa. "
11:4 Mgbe ahụ, n'elu nụrụ nke a, Jizọs sịrị ha: "Nke a ọrịa abụghị ruo ọnwụ, ma n'ihi na ebube Chineke, nke mere na Ọkpara Chineke ga-asọpụkwara site na ya. "
11:5 Jizọs hụrụ Mata, na nwanne ya nwaanyị Mary, na Lazarọs.
11:6 Bụlagodi, mgbe ọ nụrụ na ọ na-arịa ọrịa, ọ ka nọ na otu ebe n'ihi na ụbọchị abụọ.
11:7 Mgbe ahụ, mgbe ihe ndị a, ọ sịrị-eso ụzọ ya, "Ka anyị gaghachi na Judia."
11:8 The eso ụzọ ya sịrị ya: "Rabaị, ndị Juu na-ọbụna ugbu a na-achọ nkume ị. Na ị ga-aga ebe ahụ ọzọ?"
11:9 Jizọs zaghachiri: "Ọ bụghị awa iri na abụọ n'ụbọchị? Ọ bụrụ na mmadụ na-ejegharị ìhè, ọ adịghị asụ ngọngọ, n'ihi na ọ na-ahụ ìhè nke ụwa a.
11:10 Ma ọ bụrụ na ọ na-ejegharị n'ime oge abalị, ọ na-akpọ ụkwụ, n'ihi na ìhè adịghị n'ime ya. "
11:11 O kwuru ihe ndị a, a ma mgbe, O wee sị ha: "Lazarọs enyi anyị bụ na-ehi ụra. Ma m na-aga, ka m wee ịkpọte ya. "
11:12 Na-eso ụzọ ya kwuru, "Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ọ na-ehi ụra, ọ ga-adị mma. "
11:13 Ma Jizọs kwuru banyere ọnwụ ya. Ma ha chere na ọ na kwuru okwu banyere Zuru ụra.
11:14 Ya mere, Jesus mgbe gwara ha hoo haa, "Lazarọs anwụwo.
11:15 M m obi ụtọ n'ihi unu na adighi m n'ebe ahu, ka unu wee kwere. Ma ka anyị gakwuru ya. "
11:16 Ma mgbe ahụ Thomas, onye a na-akpọ Ejima, kwuru eso ụzọ ibe ya, "Ka anyị na-aga, kwa, ka anyị wee soro ya nwụọ. "
11:17 Na mere, Jizọs gara. Na ọ hụrụ na ọ nọworị n'ili ruo ụbọchị anọ.
11:18 (Ugbu a Bethania dị nso na Jeruselem, banyere iri na ise stadia.)
11:19 Na ọtụtụ n'ime ndị Juu bịakwutere Mata na Meri, ka ịkasi ha nwanne ha.
11:20 Ya mere, Martha, mgbe ọ nụrụ na Jizọs na-erute, we pua izute ya. Ma Meri nọ ọdụ n'ụlọ.
11:21 Ma mgbe ahụ Mata siri Jisus: "Onyenwe anyị, ma ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ.
11:22 Ma ọbụna ugbu a, M maara na ihe ọ bụla ị ga-arịọkwa site na Chineke, Chineke ga-enye gị ya. "
11:23 Jizọs wee sị ya, "Nwanne gị nwoke ga-ebili."
11:24 Mata wee sị ya, "Amaara m na ọ ga-ebili, na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. "
11:25 Jizọs wee sị ya: "Abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye kwere m, ọ bụ ezie na ọ nwụrụ, ọ ga-adị ndụ.
11:26 Na onye ọ bụla bụ onye bi na-ekwere na m ga-anwụ n'ihi na mgbe ebighị ebi. Ì kwere nke a?"
11:27 O wee sị ya: "N'ezie, Jehova. Ekwerewo m na ị bụ Kraịst, Ọkpara nke Chineke dị ndụ, ònye n'ime ụwa a. "
11:28 Na mgbe o kwuru ihe ndị a, ọ gara kpọọ nwanne ya nwaanyị Mary nwayọọ, si, "Onye Ozizi ebe a, na na ọ na-akpọ gị. "
11:29 Mgbe ọ nụrụ nke a, o biliri ọsọ ọsọ wee gaa ya.
11:30 N'ihi na Jizọs erubeghị n'obodo. Kama ọ ka na n'ebe ahụ Mata zutere ya.
11:31 Ya mere, ndị Juu bụ ndị ha na ya nọ n'ụlọ na ndị na-akasi ya obi, mgbe ha hụrụ na Mary bilie ngwa ngwa, pua, ha sochiri ya, si, "Ọ na-aga n'ili ncheta, nke mere na ọ nwere ike kwaa ákwá n'ebe ahụ. "
11:32 Ya mere, mgbe Mary ama rutere n'ebe Jizọs nọ, hụrụ ya, O we da n'ala n'ukwu-ya, o wee sị ya. "Onyenwe anyị, ma ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a, nwanne m nwoke agaraghị anwụ. "
11:33 Ọzọkwa, mgbe Jizọs hụrụ ya ákwá, na ndị Juu rutere na ya na-akwa ákwá, ọ sụrụ ude n'ime mmụọ ya nsogbu.
11:34 O wee sị, "Olee ebe unu liri ya?"Ha wee sị ya, "Onyenwe anyị, abịa na-ahụ. "
11:35 Na Jesus ákwá.
11:36 Ya mere, ndị Juu kwuru, "Lee otú Ọ huru ya n'anya!"
11:37 Ma ụfọdụ n'ime ha sịrị, "Ọ gaghị enye onye meghere anya onye amuru ìsì enwewo ike ime ka nwoke a na-na-anwụ anwụ?"
11:38 Ya mere, Jesus, ọzọ na-asụ ude n'ime onwe ya, biaruru ílì ahu,. Ugbu a, ọ bụ ọgba, na a nkume ahu na enịm n'elu ya.
11:39 Jizọs kwuru, sị, "Wepunu nkume." Martha, nwanne ya bụ ndị nwụrụ, sị ya, "Onyenwe anyị, ugbu a, ọ ga-esi isi, n'ihi na nke a bụ nke anọ ụbọchị. "
11:40 Jizọs wee sị ya, "Ọ kwa m asị unu na ọ bụrụ na ị kwere, ị ga-ahụ ebube Chineke?"
11:41 Ya mere, ha wepuru nkume. Mgbe ahụ, eweli anya ya, Jizọs kwuru, sị: "Nna, M na-enye ekele gị n'ihi na ị nụwo olu m.
11:42 Na m maara na ị na-mgbe niile na-anụ m, ma m kwuru nke a n'ihi na ndị mmadụ ndị na-eguzo dị nso, nke mere na ha wee kwere na i zitere m. "
11:43 Mgbe o kwuru ihe ndị a, o tiri na a oké olu, "Lazarus, pụta."
11:44 Ozugbo, onye nwụworo anwụ pua, agbụ na ụkwụ na aka na asọfe ìgwè. Ihu ya agbụ na a iche iche ákwà. Jizọs sịrị ha, "Hapụ ya na ya na-aga."
11:45 Ya mere, ọtụtụ n'ime ndị Juu, ndị bịara Mary na Martha, , ndị hụrụ ihe ndị Jizọs mere, kweere na ya.
11:46 Ma ụfọdụ ndị n'etiti ha jekuru ndi-Farisi, kọrọ ha ihe Jisus mere.
11:47 Ya mere, nnukwu ndị nchụàjà na ndị Farisii chikọta a kansul, na ha na-ekwu: "Gịnị ka anyị pụrụ ime? N'ihi na nwoke a na-emezu uche ọtụtụ ihe ịrịba ama.
11:48 Ọ bụrụ na anyị na-ahapụ ya naanị, n'ụzọ dị otú a niile ga-ekwere na ya. Ma mgbe ahụ ndị Rom ga-abịakwa were ebe nke ayi na mba anyị. "
11:49 Mgbe ahụ, otu n'ime ha, aha ya bụ Keyafas, ebe ọ bụ nnukwu onye nchụàjà n'afọ ahụ, sị ha: "Ị dịghị aghọta ihe ọ bụla.
11:50 Ma ọ bụ ka ị na-aghọta na ọ dịịrị gị na otu onye ga-anwụ maka ndị mmadụ, na na mba ahụ dum ghara ila n'iyi. "
11:51 Ma ọ na-ekwu nke a si onwe-ya, ma ebe ọ bụ nnukwu onye nchụàjà n'afọ ahụ, o buru amuma na Jizọs ga-anwụ maka mba ahụ.
11:52 Ma ọ bụghị naanị maka mba, ma iji chịkọta dị ka onye na ụmụ Chineke ndị gbasaworo.
11:53 Ya mere, site n'ubọchi, ha zubere gbuo ya.
11:54 Ya mere, Jizọs adịkwaghị ejegharị n'ihu ọha na ndị Juu. Ma o wee banye a region nso desert, ka a obodo nke a na-akpọ Ifrem. O ndidu n'ebe na-eso ụzọ ya.
11:55 Ma ngabiga nke ndi-Ju di nso. Na ọtụtụ ndị si obodo rịgooro Jeruselem tupu ememme ngabiga ahụ, ka ha wee doo onwe ha nsọ.
11:56 Ya mere, ha na-achọ Jizọs. Na ha meere ibe, mgbe guzo temple: "Kedu ihe ị chere? Ọ ga-ahụ ụbọchị oriri?"
11:57 Na nnukwu ndị nchụàjà na ndị Farisii nyere iwu, mere na ọ bụrụ na onye ọ bụla ga-ama ebe o nwere ike ịbụ, ọ ga-ekpughe ya, ka ha wee na-agbalịsi ya.